अर्थमन्त्रीमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते सरकारको यस बर्षको वार्षिक बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ । पानी समेत नपिएर पाठ गरिएको बजेट भाषण हरेक वर्षको निरन्तर श्रृखला हो । फेरि बजेटबारे सत्ता पक्षको वचावट र प्रतिपक्षको विरोध पनि सुरु भइ सकेको छ । त्यसो त बजेट व्यवस्था हुँदैमा आयोजना बनि हाल्छन भन्ने पनि छैन हाम्रो देशको परिपेक्षमा । समग्रमा भन्नुपर्दा यसपालीको बजेटले केही आशा र विकासप्रतिको प्रतिवद्धता भने राम्रै गरेको छ ।
म वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भएकाले त्यसबारे केही धारणा राख्न चाहन्छु । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाबारे पनि बजेटमा केही बुँदा समेटिएका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई बैङकिङ प्रणाली मार्फत रकम पठाउन प्रोत्साह गर्ने भनिएको छ । प्रोत्साहन मात्र गरेर हुँदैन यसका लागि तत्काल कानून बनाएर सहज ढंगले रकम पठाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसले विदेशमा रगत पसिना गरेर कमाएको पैसा गाँउ–गाँउका झुपडी सम्म पुग्छ । हुन्डी थप्ने दलाल आफैं पाखा लाग्छन् । कोरियाबाट पहिला प्रायः सबैले हुण्डी मार्फत नै पैसा पठाउथे । बैंकिङ प्रणाली भएपनि सबैले यो बाटो अपनाएका छैनन् । त्यसकारण हुन्डी कारोबारीको ‘चकचकी’ थियो ।
अहिले कोरियामा बिभिन्न रेमिट कम्पनी खुलेका छन् । वैधानिक माध्यमबाट आय नेपाल पठाउन सजिलो भएको छ तर अझै सबैले वैधानिक बाटो अपनाएका छैनन् । यसको कारण कानुन कडा नहुनु हो । कोरियामा भेट हुने धेरै साथीहरूलाई सबैले रेमिटबाटपैसा पठाउनुपर्छ, अहिले त बिभिन्न रेमिट कम्पनी खुलिसके भन्दा हामीले कानूनी रुपमा पैसा पठाएर के गर्नु ? पठाएको रेमिट्न्यस नेताहरुले भ्रष्टाचार गरेर सक्नछन भन्ने जवाफ दिन्छन् । धेरैले भन्ने गरेका छन् नेपालमा जुन हुण्डी गर्ने मान्छे छ्न या त तिनिहरु नेताका आसेपासे छन या त व्यापारी । यो सञ्जाल भत्काउन नीतिगत व्यवस्था नै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
विदेशबाट आउने आयलाई लघु उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र बिदेशबाट फर्केकालाई सीपको आधारमा १० लाखसम्म कर्जा दिएर ग्यारण्टी बीमा गर्ने बजेटले राम्रो व्यवस्था गरेको छ । एक श्रमिकको नजरबाट हेर्दा यो बजेट सबैभन्दा राम्रो पक्ष समान कामका लागि समान ज्याला नीति लागू गर्ने भनेको छ,यो राम्रो छ । तर, कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ ।
कर्मचारीको तलब बृद्धि भएको छ । तर, श्रमिकको तलब भने सारै न्यून छ । बजेटमा न्युनतम ज्यालामा पुनरवलोकन गरिने भनिएको छ । पुनरवलोकन गर्दा श्रमिकको ज्याला बृद्धि हुनुपर्छ । किनकी तलब बढ्ने बित्तिकै महँगी बढ्ने निश्चित छ, त्यसको मार तल्लो तहका ज्यालादारी कर्मचारीलाई पर्न जान्छ । बालश्रम शोषण सभ्य समाजका लागि सुहाउने विषय होइन । तर,नेपालमा बालश्रमको दुरुपयोग व्याप्त छ । बजेट भाषणमा यो विषयले स्थान पाएको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।
मुलुक भित्र थप रोजगारी सृजना गरि क्रमसः नेपालीलाई विदेश जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्ने , रोजगार प्रत्याभुति विधेयक ल्याउने योजना पनि पूर्ण लागू भएमा देशमा युवा पलायन रोेकिने निश्चित छ । प्रत्येक प्रदेशबाट श्रम स्विकृती गर्न पाउने ,रोजगार सूचना केन्द्र निर्माण गर्ने योजना स्वागत योग्य कदम हुन् ।
सबै जिल्लामा ‘आफ्नो गाँउ आफैं बनाउ’ को अभियानले २०५२ सालकै बजेटको झल्को दिन्छ । अन्य राम्रा पक्षमा जुन सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत गर्भा अवस्था देखि बृद्धा अवस्थासम्म समाजिक सुरक्षा भत्ता , योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योगदान कर्तालाई योगदानसहितको परिचय पत्र प्रदान गर्ने सबै नागरिकलाई स्वाथ्य बीमाको दायरामा ल्याउने योजना पनि बजेटको ऐतिहासिक फड्को हो । कृषिको आधुनिकीकरण , सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने र सीपमूलक प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनु पनि राम्रो पक्ष हो । (ओझा सचिव, प्रवासी मजदूर संगठन)
प्रकाशित २0 जेठ २0७६ , सोमवार | 2019-06-03 09:28:40